အီးရောင်ဝါးမဖြစ်ကြတော့နဲ့… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အီးရောင်ဝါးမဖြစ်ကြတော့နဲ့…
– ငါအခုလို လူဖြစ်လာတာ ရှေးရှေးဘဝက ငါ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ဆိုရင် လက်ရှိဘဝ ငါ့မိဘ၏ မေတ္တာစေတနာ အနစ်နာ စသည့် စသည့်ဖေါ်ပြလို့မကုန်နိုင်သည့် ငါ့မိဘ၏ကျေးဇူးတရားများကို သစ္စာဖေါက်ကျေးဇူးကန်းရာရောက်ပါမည်…
– ငါအခုလို ဖြောင်းသန်းသည့် ခရီးလမ်း လျှောက်လမ်းနိုင်တာ ရှေးရှေးဘဝက ငါ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ဆိုရင် လက်ရှိဘဝ ငါ့ကို သွန်သင်ဆုံးမ လမ်းညွှန်ပြသည့် ဆရာသမားကို သစ္စာဖေါက်ကျေးဇူးကန်းရာရောက်ပါမည်….
– ငါအခုလို လောကအလည်မှာ အဆင်ပြေနေတာ ရှေးရှေးဘဝက ကုသိုလ်ကံကြောင့်ဆိုရင် လက်ရှိဘဝ ငါ့ကိုကူညီဖေးမ စောင့်ရှောက်ကြသည့် အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေများနှင့် လူသားအများကို သစ္စာဖေါက်ကျေးဇူးကန်းရာရောက်ပါမည်…
ဘဝ၏အကောင်းအဆိုး အကြောင်းအကျိုးမှန်သမျှ ရှေးဘဝ ကုသိုလ်ကံက ပြဌာန်းတာမှန်ရင် လက်ရှိ ဘဝ ဇွဲလုံးလဝိရိယ ပြော၊ပြု၊၊နေကြ ပစ္စပန်ကံမှန်သမျှတွေကို အသိအမှတ်မပြုရာရောက်သလို မိမိကိုယ်မိမိမပိုင် သူများချုပ်ကိုင်ရာနောက် တကောက်ကောက်လျှောက်လမ်းကြပေရဦးမည်….ဒါကြောင့် စဉ်းစားမျှော်မြင် ဆင်ခြင်ကြလော???….
နောင်ဘဝမှာ.. ကောင်းမွန်စွာနေရ.. နတ်ဘုံနန်းစံရအောင်.. ရည်ရွယ်လုပ်နေတာတွေကျ.. ဘယ်သူ့သစ္စာဖေါက်ကျေးဇူးကန်းရာရောက်မလည်း.. သိချင်သား…
သစ္စာဖေါက်ကျေးဇူးကန်းလို့ မြန်မာပြည်ဒုက္ခရောက်နေကြတာ သက်သေပေါ့
အခုမဖြစ်လည်း.. နောင်ဘဝဖြစ်မယ်.. နောင်ဘဝမဖြစ်လည်း.. နောက်နောင်ဘဝဖြစ်မယ်..။
နောက်ကမ္ဘာ၁သိန်းလောက်မဖြစ်လည်း.. နောက်ကမ္ဘာ ၁သချေင်္လောက်ဆိုဖြစ်မယ်.. ။
နောက်ကမ္ဘာ၁သချေ်မဖြစ်လည်း.. နောက်ကမ္ဘာ.. ၃သချေ်လောက်ဆိုဖြစ်မယ်..
ဒါက KOO’s way ပေါ့။ :-))
ကျွန်မလဲ အဲဒါကို လက်ခံပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ မှန်တယ် လို့ တော့ မပြောနိုင်ပါဘူး။
“ငါအခုလို လူဖြစ်လာတာ” ဆိုရာမှာ “လူ” ဖြစ်ဖို့ ပထမဆုံး ဖန်တီး တဲ့ မိဘ ဆိုတာ ကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ရွေးပိုင်ခွင့် မရလိုက် ကထဲ က “အတိတ်ကံ” က စပြီး ဦးဆောင်နေခဲ့တာ မဟုတ်လား။
လူကလေးစဖြစ်လာပြီးမှ မလိုချင်လို့ ဖျက်ချပစ်လိုက် တဲ့ အမေ ရဲ့ ဝမ်းထဲ ဝင်လိုက်မိတာ Random ဖြစ်လို့ဘဲ လား။
လူ စဖြစ်လာ ကထဲ က ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ရွေးပိုင်ခွင့် မရခဲ့တာ မို့ အင်တန်နိမ့်ကျ တဲ့ ဘဝ ဖြစ်နေတဲ့ မိဘ နဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြီးခွင့်ရတာ ကရော Random ဖြစ်လို့ဘဲလား။
တစ်ချို့လဲ လူနေမှုနိမ့်ကျပေမဲ့ စိတ်ဓာတ်ရေးရာမြင့်တာလဲ ရှိတာမို့ သားသမီး ကို ပိုမြင့်တဲ့ ဘဝ ရောက်အောင် ပို့နိုင်တာလဲရှိ။
တစ်ချို့လဲ လူနေမှုလဲနိမ့် စိတ်ဓာတ်ရေးရာလဲ နိမ့်တော့ သားသမီးကို ဂရုမစိုက်။
မိဘ မကောင်းလဲ ကိုယ် က သာ ကြိုးစားချင်စိတ်ရှိရင် မိဘ ညံ့လဲ သားသမီးတော်တဲ့ သာဓက တွေ အများကြီး ရှိတယ်လို့ လဲ ပြောလို့ ရပါတယ်။
အဲဒီမှာ “ကြိုးစားဖို့ စိတ်” ဖြစ်လာတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ မှန်ကန်တဲ့ အတွေးအခေါ် ရလာဖို့ ကိုယ်ဆီက ဘဲ ဖြစ်လာပါတယ်။
အဲဒီလို စဉ်းစားတတ်ဖို့ ကို အသိ ပါ မလာလို့ လက်ရှိ ကံ ကို ကောင်းအောင် မလုပ်နိုင်တာလဲ ဖြစ်နိုင် ပါတယ်။
အဲဒီ စိတ်ဟာ အတိတ်ကံ က နေ အထုံ ပါလာတာ လို့ လဲ ပြောနိုင်ခဲ့ရင် ဒီမှာလဲ “အတိတ်ကံ” က လွှမ်းမိုးနေပြန်ပါတယ်။
ပြောလိုတာက လက်ရှိကံ /လက်ရှိ အလုပ် အရေးမကြီးဘူး လို့ မပြောပါဘူး။
လက်ရှိကံ/အလုပ် က မှန်ကန် တဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ သွားနေတာ ဟုတ်/မဟုတ် ကတော့ အတိတ်ကံ က ဇာတ်ဆရာ လို့ ဘဲ ထင်ပါတယ်။
အဲဒီ “လက်ရှိကံ” ဆိုတာ က လဲ တစ်ချိန်မှာ “အတိတ်ကံ” ဖြစ်သွားမှာ လို့ လဲ ထင်ပါတယ်။
အခုချိန်မှာ ကျွန်မ လဲ လက်ရှိ ဘဝ ကို ပိုပိုကောင်းအောင်ကြိုးစား နေပါတယ်။
အဲဒီလို ကြိုးစားရင်း လုပ်ချင်တာ မဖြစ်၊ ဖြစ်ချင်တာ တွေ ဖြစ် နေ တဲ့ သဘော ကို ရိပ်စား မိချိန် ကိုယ့်ကိုယ် ကို သိပ်ပြီး လက်မ မထောင်ရဲတော့ပါဘူး။
အဲဒီ အချိန် ငါလုပ်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့ မာန်မာန ကျိုးသွားတာ မို့ တစ်ခါတစ်ခါ တော့ လဲ ကံစီမံရာ ဆိုတဲ့ သဘော ကို လက်ခံနေဆဲပါဘဲ။
လောကကြီး ထဲ ဘယ်လောက်ကြိုးစား သူ ဖြစ်ဖြစ် သူ လိုချင်တာ မဖြစ် တာ တွေ့ချိန် ဘုရားသခင် အလိုတော် (သို့) ကံ စီမံရာ လို့ တွေးလိုက်တာ က စိတ် ကို အင်တန် သက်သာ စေတာမို့
တကဲ့ အမှန်တရား တစ်ခု ဟုတ်ချင်မှ တော့ ဟုတ် မယ်။
စိတ်အေးချမ်းဖို့ တော့ ဆေးတစ်ခွက်ပေါ့။
မှတ်ချက် – ကိုယ်လုပ်ချင်တာ အမြဲ ဖြစ် နေသူ၊ ဘယ်တော့ မှ အရှုံး ကို မတွေ့သူ ရှိရင်လဲ သူ့ way နဲ့ သူ တွေးလိမ့်မပေါ့။ နော။ :-)))
လက်ရှိ မြန်မာပြည် ဒုက္ခရောက်နေတာ က ဘာသာရေး နဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ပါ။
အတ္တကြီးလွန်း တဲ့ ငါ့ဘို့သမား များ အာဏာကို မစွန့်နိုင်လို့ ဖြစ် နေတာ အရှင်းပါ။
ဘာသာရေး က အသုံးချခံပါ။
လက်ရှိကံ မှာ အတွေးအခေါ်နိမ့်ကျ နေကြတာ အတိတ် မှာ နိမ့်ကျ အောင် ဆွဲချ ထားခဲ့ လို့ သံသရာ လည် နေခြင်းပါ။
ဒီမှာလဲ အတိတ် နဲ့ လက်ရှိ ဆက်နေတာပါဘဲ။
အရီးလတ်ကို.. ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကမ်းက…လတ္တီတွဒ်/လောင်ဂျီတွဒ် 34.008168, -118.496042 က.. ကျောက်တုံးဘေး.. မြက်ပင် ၂၃၄ ပင်ထဲ.. ပင်လယ်ဖက်.. ၃ခုမြောက်အနီးဆုံးကျတဲ့.. အရွက်ရှည် ၃ခုနဲ့အရွက်တို ၆ခုရှိတဲ့… မြက်ပင်ရဲ့.. အမြင့်ဆုံးအရွက်ထိပ်ကနေ.. ၁.၄၄လက်မနေရာမှာနားနေတဲ့..လိပ်ပြာရဲ့… တောင်ပံခတ်ပြမှနဲ့တူတယ်….။
စမိရင် မပြီးတော့ဘူး။ ဟိ။
တကယ်ဖြစ်ချင် တကယ်လုပ် အဟုတ်ဖြစ်ရမည် ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဖြစ်ချင်တာ မဖြစ်ရင် ဖြစ်ချင်ရာ ဖြစ်စမ်း ဆိုတာ ကို
ဆင်ကန်းတောတိုး ဖြစ်တယ်လို့ ပြောတာ က တော့ မမှန်ဘူးထင်ရဲ့။
လက်တွေ့မှာ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာ မဖြစ်ချိန် …
. ဖြစ်ချင်တာ သူ့ဟာသူဖြစ်နေချိန် …
. ဖြစ်ရာမှာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရင်း နေရတာ တွေလဲ ရှိပါတယ်။
ကလေးများ ကို ကြိုးစားဖို့ အားပေးချိန် လောကကြီး အကြောင်း ကို နားလည်နေအောင်လဲ ပြောဖို့လိုပါတယ်။
မင်းတော့ ကြိုးစားရင်ဖြစ်ကို ဖြစ်မယ် လို့ ပြောရင် ကလေးမှာ ပရက်ရှာများပါတယ်။
.ကြိုးစားဖို့ က မင်း အလုပ်၊ ရမရ က သူ့ဟာ နဲ့ သူ ဖြစ်သွားမှာ။ အဲဒါကို အတင်းကြီး ခေါင်းထဲ မထား နဲ့ လို့ ပြောသင့်ပါတယ်။
.ပေါ့ဆဖို့ မဟုတ်ဘူး။ ကျားကုတ်ကျားခဲ ကြိုးစား ဖို့လိုတယ်။
ဒါပေမဲ့ လောကကြီး ရဲ့ မာယာများပုံ ကိုလဲ ကြိုပြောမထားရင် အရှုံး နဲ့ တွေ့ချိန် ခံနိုင်ရည် မရှိတာမို့ နလံမထူအောင် ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ အရှုံးကို blame လုပ်ဖို့ အရာ တစ်ခု ထားနိုင်ရင် ခံသာပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ မှာတော့ “အတိတ်ကံ” အရ လွဲတာပေါ့။
ဒါထက် ကောင်းတာ ရဖို့ အတွက် အခုချိန်မှာ ရှုံး ရတာ လို့ လဲ စိတ်ဖြေခဲ့ရပေါင်းလဲ များပါတယ်။
ကျွန်မ ကတော့ ရုပ်ရှင် တစ်ကားထဲ က “It is written” ဆိုတာ ကို အင်မတန် သဘောကျပါတယ်။
အနာဂါတ် မှာ ကိုယ်ဘာဖြစ်မယ် ဆိုတာက ရေးထားပြီးသားတွေပါ။
ဒါပေမဲ့ ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ် လိုပေါ့။
Result တွေ ကအများကြီး ရှိနေပါတယ်။ If pattern တွေ နဲ့ စစ်ထားတာမို့ ကြိုးသာ ကြိုးစားပါ။
ကိုယ့်ကြိုးစား မှု နဲ့ ဆီလျော် တဲ့ “ကြိုရေးထားပြီး ရလာဒ် တစ်ခု” ကို ရလာပါလိမ့်မယ် လို့ဘဲ။ :-)))
.ကိုအောက်အောက်။ အရင်က ကိုအောက်အောက် စာတွေမဖတ်ဖူးဘူး။ ခုမှ ဖတ်ဖူးတယ်။ တစ်ပုဒ်ထဲနဲ့ ဟတ်ထိ။
.အပေါ်မှာ ဂျီးတော်မြပြောပြီးပီမို့ထပ်မပြောတော့ပါဘူး :))
အတိတ်ကံဆိုတာ တခ ျက်ထဲ တနှစ်ထဲ ကြည့်လိုမြဘူး.. တသပ်လုံးစာ ဂရပ်ဖ်ဆွဲကြည့်မှ မြင်ရထှာ။ ကြည့်ဓါတ်လ ျင် အသပ်၂ဝသမားက သူ့အသပ်၂ဝကံ မြင်ရမဲ၊ ၄ဝသမား ၄ဝကံ မြင်ရမဲ။ လူတယောက်ထဲမှာကိုပဲ အသပ်၂ဝကံနဲ့ အသပ်၄ဝကံ မတူတာ တွေ့ဂေါင်းတယ်။ သေခါနီး တသပ်လုံးစာ မြင်ရဒေါ့မှ ကံဆိုတာ ဒါပါလား တွေ့လိပ်မဲ။ ဒါကြောင့် Never Say Never Die လို့ ဂ ျိမ်းစ်ဘွန်း ပြောခဲ့ဒါ။
မသိနိုင်မမြင်နိုင်သည့်အရာကို သိသယောင်ယောင်ပြောသောသူသည် ဟန်ဆောင်သူဖြစ်၏ အနရိယာဖြစ်၏..
ကိုယ်ထင်ရာ အဟုတ်ထင် စွတ်ပြောသူသည် အစွတ်ယိလှ ျာဖြစ်အိ…။
အဟုတ်ထင်လို့ပြောခြင်းမဟုတ် အဟုတ်မြင်လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါသည် အထင်နှင့် အမြင်မတူပါ ပထမက ငါဒီလိုထင်တယ် ဆိုတယ်ရင် ထင်တာတင်မရပ်ဘဲ မြင်တဲ့ အဆင့်အထိ ဆက်သွားရပါမည် ဒါကိုမမြင်ဘဲ ဆက်သွားရင် ကိုယ်ပင်ပန်းခရီးနွမ်းသွားပါလိမ့်မည်
ဒွတ်ခ ဒွတ်ခ.. ကိုယ်ဘာဖြစ်လို့ ဖြစ်နေမှန်းလဲ မသိ..
မားပြို အောက်အောက် ……